Mitandrina Fatratra Ireo Avy Ao Taiwan Taorian’ny Naninjiran’i Shina Ny Tànany Hatrany Kenya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2016 2:35 GMT
Ireo olompirenena Shinoa sy Taiwanese noroahana avy any Kenya, tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Beijing renivohitra, ny 13 Aprily teo. Sary avy amin'ny Xinhua News, masoivohom-baovao an'ny fanjakàna
Niisa 45 ireo teratany Taiwanese nosamborina noho ny filazàna azy ireo ho nanao hosoka tamin'ny fifandraisan-davitra tao Kenya nandritry ny fivahinianany tao ny 2014, noroahana hiverina tany Shina tamin'ny herinandron'ny 4 Aprily izay ireo.
Telo amby roapolo tamin'ireo Taiwanese nenjehina no tsy nohelohina, ary 24 hafa no nosamborina taminà raharaha hafa, izay tsy nandalo tamin'ny dingan'ny raharaham-pitsaràna. Raha tsy nisy voamarina ho meloka ny iray tamin'izy ireo tany amin'ny fitsaràna tao Kenya, noho ny tsindry avy amin'ny governemanta Shinoa dia nanapaka hevitra ireo manampahefana Keniana ny handroaka ireo Taiwanese, nanery azy ireo hiondrana anaty fiaramanidina hitodi-doha ho any Shina raha tokony ho any Taiwan.
Nofaritan'i Taipei ho toy ny “fakàna an-keriny tsy ara-dalàna” sy “hetsiky ny tsy nandia fianarana” ny zavatra nitranga, taorian'ny fandroahana voalohany ireo teratany Taiwanese valo tamin'ny 8 Aprily. Saingy tsy nisy vokany ilay fanambaràna diplaomatika. Nandritra ilay andianà fandroahana faharoa, nirodorodo nankeny amin'ny rindrina iray tao amin'ny fonja ireo polisy Keniana mitam-piadiana ary nampiasa entona mandatsa-dranomaso mba hanerena ireo Taiwanese 15 mahery voafonja tao handray ny fiaramanidina ho any Shina.
Nahaleotena ara-politika i Taiwan hatramin'ny 1950, saingy nisisika hatrany i Beijing milaza fa ampahany amin'ny tanin'ny Shina ilay faritra. Tsy manana fifandraisana diplaomatika amin'i Taiwan i Kenya, fa manana kosa miaraka amin'i Shina.
Nanamarina ilay fandroahana ny minisitry ny atitany Keniana, tamin'ny fanitrikitrihana fa avy any Shina ireo Taiwanese ireo no niditra nankao Kenya.
Tamin'io fotoana io ihany, nolazain'i Beijing fa manoloana ny lalàna dia manana fahefàna izy amin'ireo Taiwanese satria ry zareo ireo voalaza ho voarohirohy tamin'ny hosoka fisandohana fifandraisan-davitra tany amin'ny tanibe Shinoa. Tazonina hanaovana fanadihadiana ary mety hiharan'ny fanenjehana henjana any Shina ireo teratany Taiwanese voaroaka ireo.
Niezaka ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny ao Taiwan nifandray tamin'ireo parlemantera Keniana sy ireo mpikatroka mpiaro zon'olombelona mba hitady fanampiana amin'ny fametrahana fitoriana ny minisitry ny atitany ao Kenya, ny inspektera jeneralin'ny polisy ary ny lehiben'ny fampanoavana, tamin'ny fiampangàna azy ireo ho nanitsakitsaka ny zo maha-olona ireo olom-pirenena Taiwanese, noho ny fitànana azy ireo tsy ara-dalàna, ary ny niarahany niasa tamin'ireo manampahefana avy amin'ny masoivohon'i Shina mba hanamoràna ny fandroahana azy ireo ho any Shina.
Nampahatahotra ireo Taiwanese maro ny fitomboan'ny faritra tratry ny dindon'i Shina, izy ireo izay manahy mikasika ny amin'ny tenany manokana rehefa miasa na mivezivezy any ivelany. i Lucien Cheng-hsia Lin, mpampiasa Facebook, dia tezitra amin'ny fanapahankevitra fandroahana nataon'ny governemanta Keniana:
Fihetsika masiaka ny an'ny governemanta Keniana. Niditra tao Kenya tamin'ny alàlan'ny pasipaoro Taiwanese ireo teratany Taiwanese. Nekenareo ny pasipaoro fony ry zareo niditra ny firenena, koa rehefa injay handroaka azy ianareo, dia tokony nampifanaraka izany tamin'ny pasipaoro.
Talohan'io, 10 ireo Taiwanese noahiahiana ho nanao hosoka tamin'ny fifandraisan-davitra no niverina avy any Kenya ho any Taiwan taorian'ny nahitana fa tsy meloka izy ireo teo anatrehan'ny fitsaràna. Nino tanteraka ireo Taiwanese fa ny tsindry avy any Beijing no nanosika ireo manampahefana Keniana handray ilay fepetra fandroahana ny hafa ho any Shina. Lu Chiu-yuan, mpisolovava, nametraka ity fanontaniana manaraka ity tao amin'ny Facebook-ny :
Ahoana no ahazoan'ny polisy Shinoa maneritery ny fahalalahan'ireo teratany Taiwanese any amin'ny firenena hafa ary mitondra azy ireo hiverina any Shina hoe hanaovana fanadihadiana lalindalina kokoa sy hotsaraina? Raha mitombina ny zavatra tahàka izany, amin'ny hoavy rehefa voarohirohy aminà heloka bevava misy ifandraisany amin'ny governemanta na ireo teratany avy amin'ny tanibe Shina ireo teratany Taiwanese, afaka misambotra azy ireny any amin'ny firenena hafa ve ny governemanta Shinoa?
I-Fan, Taiwanese mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, izay niaraka nanoratra ity lahatsoratra ity, dia efa tany Kenya fahiny. Naneho ny tahony tao amin'ny Facebook izy :
這次事件對於常出國旅遊的台灣人來說真的非常可怕, 我們可能莫名其妙 (在當地政府也沒有說我們有違法的情況下) 就因為中國政府宣稱我們犯了中國法律就被遣送到中國去了. […] 假如我們容許這次肯亞事件的前例的話, 中國有反國家分裂法, 意思就是中國只要宣稱我們是台獨份子就可以要求當地政府遣送我們到中國去接受審判.
Mampivarahontsana an'ireo Taiwanese mpivezivezy matetika ity tranga ity. Mety horoahana hiverina any Shina izahay rehefa ny governemanta Shinoa no miteny fa hoe nohitsakitsahanay ny lalàna Shinoa (na dia tsy nisy lalàna nohitsakitsahanay akory aza tany amin'ilay firenena nalehanay). […] Raha ekenay ho toy ny tranga mitombina ny nitranga tao Kenya, manana lalàna manohitra ny fisintahana i Shina ary dia tsy misy ilain-dry zareo afa-tsy ny fitenenana fotsiny hoe mila averina avy any amin'izay firenena misy anay ho any Shina mba hotsaraina izahay.mpiaro ny fahaleovantenan'i Taiwa.
Tamin'ny 2011, nahavita fifanarahana iray ho fiarahana miady amin'ny heloka bevava i Taiwan sy Shina, izay mamaritra fa ireo Taiwanese mpanao heloka bevava avy any amin'ny firenena iray nalehany dia ho averina any Taiwan hiatrika fitsaràna. Maro no mandray iny fihetsik'i Beijing vao haingana iny, izay toy ny mandeha mifanohitra amin'izay fifanarahana izay, ho marika fampitandremana ho an'i Tsai Ing-Wen, ilay filoha vaovao ao Taiwan avy amin'ny antoko demaokratika liam-pivoarana, mpandàla ny fahaleovantena, ary tena mahavelom-panahiana an'i Shina. Brian Hioe avy amin'ny gazetiboky ety anaty serasera, New Bloom, nanipika hoe :
Raha mahavita mandresy lahatra firenena maro mba hanamora ny tsy fanekena an'i Taiwan ho ara-dalàna i Shina ary mampihorohoro ireo teratany Taiwanese any ivelany, mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahafahan'i Taiwan hitazona ny filazàny ny tenany ho firenena sy fanjakana mahaleotena izany.
Manaraka ny fotokevitra Shina tokana i Shina sy ireo rantsana sasany ao Taiwan, indrindra fa ilay antoko Kuomintang mpandàla ny fampiraisana, fotokevitra izay mifikitra amin'ny hoe firenena tokana i Shina sy Taiwan. Ny tsy fitoviankevitra dia mijanona eo amin'ny hoe ny governemantan'iza no misolo tena ny “tena Shina”. Na dia mizaka tena ara-pitantanana aza i Taiwan, tsy mbola nanao dingana mihitsy haha-ofisialy ny maha-mahaleotena azy izy, ary ny Repoblika Entimbahoakan'i Shina (tanibe Shina) no eken'ny ankamaroan'izao tontolo izao, fa tsy ny Repoblikan'i Shina (Taiwan).
Leferin'i Beijing ny fisoloana tena ataon'ny governemanta ao Taiwan manoloana ny vahoaka ao Taiwan ho toy ny Shina ara-drariny, amin'ny fanantenana fa hampitonitony ny hetsika fitakiana fahaleovantena izany, Saingy mety hiafara amin'ny fanosehana ireo Taiwanese hiroso hatrany hitaky fahaleovantena sy hiala amin'ilay fotokevitra Shina tokana ireny fampodiana ireny, raha toa ka midika hoe mijoro miaraka amin'i Shina ilay firenena rehefa ny resaka fiarovana an'i Tawian no voatohintohina.